I-Il Giardino di Ada Ground Floor Studio ene-AC nePatio
Monterosso al Mare, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Cinque Terre Riviera
Sethula lesi sakhiwo
I-Il Giardino di Ada Ground Floor Studio ene-AC ne-Patio iyindawo enethezekile nenhle kakhulu ezoqashwa eMonterosso al Mare, endaweni yase-Fegina. Iseduze namabhishi kanye nebanga lokuhamba ngezinyawo ukusuka esiteshini sesitimela.
I-Il Giardino di Ada itholakala esakhiweni sokuhlala esiseduze ne-Sciacchetrà Apartment. Njengoba ifulethi eliseduze linevulandi elihle.
I-Studio iyindawo evulekile enombhede osofa ababili, ikhishi netafula lokudlela kanye negumbi lokugezela elineshawa nomshini wokuwasha.
Indawo inikeza i-AC ne-WIFI.
I-Il Giardino di Ada Ground Floor Studio ene-AC ne-Patio iyisixazululo esihle sokuqashwa kwabavakashi ababodwa nabashadile. Ukufinyelela kuphansi phansi kulula. Kuyizinyathelo ezimbalwa kuphela ukusuka emgwaqeni omkhulu futhi, ngenxa yalesi sizathu, kunconyelwa kuzo zonke izihambeli ezingathandi ukugibela izitebhisi eziningi noma ezinokukhubazeka (cabanga ngezinyathelo ezingu-5 ehholo lokwakha). Intofontofo futhi iyamukeleka, iseduze kakhulu namabhishi!
I-Il Giardino di Ada Ground Floor Studio ene-AC kanye ne-Patio itholakala esakhiweni sokuhlala esiseduze ne-Sciacchetrà Apartment futhi iyisixazululo esifanelekile somndeni wezihambeli ezingafika kwezi-7.
Futhi uma iphathi yakho inkulu, akukho ukukhathazeka. Ebhilidini elifanayo, esitezi sesine, siqasha enye indlu enhle enamagumbi amabili okulala enokubukwa kolwandle, ebizwa ngokuthi i-Scimiscià, ethatha izivakashi ezingafika ku-13.
Usayizi: 27 m2.
Izinsiza: Umbhede osofa ababili, Izindlela zokuhlanza ezithuthukisiwe, Ukuhlanza izinkampani ezichwepheshile zokuhlanza, Izibulala-magciwane ezisetshenziselwa ukuhlanza, Amakhemikhali okuhlanza asebenza ngempumelelo ngokumelene neCoronavirus, Ukuqhelelana komphakathi kulandela imihlahlandlela yeziphathimandla zendawo, Inqubo ekhona yokuhlola impilo yezivakashi, Imaski yobuso iyatholakala , Isicoci sesandla siyatholakala, Izikrini noma izithiyo ezibonakalayo ezibekwe phakathi kwabasebenzi nezihambeli ezindaweni ezifanele, Ukungena nokuphuma ngaphandle kokuthinta kuyatholakala., Abasebenzi balandela zonke izimiso zokuphepha eziphuma kuziphathimandla zendawo, Amalineni, amathawula nempahla ewashwayo ngokuvumelana neziqondiso zeziphathimandla zendawo, Ilineni namathawula kugezwe okungenani ku-60°C/140°F, Amapuleti, izinto zokusika, izibuko nezinye izinto zetafula ezihlanjululwe, izindawo ezithintekile zifakwe amagciwane, Indawo yezivakashi evalwa ngemva kokuhlanzwa, Abasebenzi bagqoka okokuzivikela, Ukuhlolwa kwezinga lokushisa kubasebenzi, I-COVID- Kudingeka imibhalo ehlobene engu-19, Izivakashi ezivela emazweni athile azivunyelwe, Amagilavu atholakala kubavakashi, Impahla yosizo lokuqala iyatholakala, Inkokhelo Engenamali iyatholakala, ukudla okugoqwe ngakunye kwebhulakufesi, Italy Federalberghi National Protocol Accoglienza Sicura (Safe Hospitality) yalandelwa umthetho wokukhucululwa kwendle;
Amabhishi - 50 m
Ukupaka izimoto - 250 m
Imakethe - 150 m
Indawo yokudlela - 50 m
Isiteshi sesitimela - 350 m
Ibungazwe ngu-Cinque Terre Riviera
Inombolo yepholisi: 011019-LT-0226
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-R4508.